The gold processing machines were sourced by the Zanu-PF Youth league to capacitate youths who are into small scale mining. Zimbabwe is the main supplier of the equipment in the region.
Dec 08, 2019 As the government encourages more people to join the artisanal mining trade and unemployment rages, farmers in Zimbabwe say they are increasingly battling the negative impacts of small-scale mining. While large commercial mines are regulated and have strategies to protect the local environment, small-scale miners often operate outside of
Dec 25, 2020 The c apital of Zimbabwe is Harare and it is also the largest city. Zimbabwe has roughly 16 million of population. There are 16 official languages of Zimbabwe with English, Ndbele and shona being most commonly used. Similarly, t he economy of Zimbabwe majorly depends on agriculture and mining sector. Tourism is also an important industry in the